Oow koombe iyo Isbaaro – Maanta Online
Maanta iyo Caawa Magaaladu waxa ey aheyd Xabsi kor Ka furan, Dad badan ayaa dhiig Kar Ku dhacay, farmashiyaashana Daawo badan ayaa u gadan tahay.
Markii Bajaajkii aan Saarnaa Kala wareeg la yiri, ayaan iska Soo lugeeyay, Anniga lafteeyda ayaa haddana Kala wareeg la i yiri, ugu Dambeeyn waxaan Soo gaaray Halkii aan u socday, waxaan Irida kula kulmay Oow Koombe oo Kala wareeg la leeyahay, in kasta oo aanan Shakhsi ahaan isu aqoon, haddana wajigiisa ayaan aqoonsaday.(F.S:1aad)
Ilaaladii ayaan Ku iri: Ninkani waa Oow Koombe sii daaya, Hotelka ha galee, waxaa la igu yiri: Garan meyno, odaygaan sixirka ah ee Naga wad, yuuna nagu qarxine. Dood dheer kadib waxaan Ku guuleystay in la sii daayo.
Socodkeygii ayaan sii watay, waxaan tagay Makhaayadii aan u socday, waxaan kula kulmay Shimaali Ahmed Shimaali oo Neef tuurayo oo leh, Makhaayadan oo ii muuqato ayaan Saddax kilometer u Soo wareegay. (F.S:2aad)
Waan Ka tagay, si aan dib ugu noqdo Xaafadeydii, waxaan la kulmay wadadii aan Soo maray oo Cagafcagaf uu Ku xirayo Dhagxaan Cusub.
Dib ayaan u noqday, Caawa Qol aan Joogto waxaa i siiyay Saaxiibkeey Yaasiin Yare.
Ilaa Berri Qolkaan ayaa Xabsi ahaan ugu jiri doonaa.
Magaaladu sidaan miyey Ku sii jiri doontaa?
← Madaxweynihii saddexaad oo Kismaayo lagu doortay
Kenya oo heegankii ugu xooganaa gelisay ciidamadeeda xadka ay la wadaagto Soomaaliya →